कालाका कुरा | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो कालाका कुरा
on: ५ माघ २०७४, शुक्रबार ०८:०३ तीतो मीठो 43 views
हिजोआज मान्छेको उमेर खुट्याउनै गाह्रो । कुन आमा, कुन छोरी चिन्न मुश्किल । अथवा कुन बाउ वा दाइ, कुन भाइ वा छोरा चिन्नै गाह्रो । अझ को पाको को कच्चा, को झूटो को सच्चा, छुट्याउनै मुश्किल । शुरूशुरूमा त मानव विकास सूचकाङ्कमा आएको सुधारका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आएर यो सबै भएको भन्ठान्थे । तर, जब आफ्नै शिरमा बेला कुबेलामा हिउँ परेजस्तो देखिन शुरू गर्‍यो, त्यसपछि मात्र यो कालोको कर्तुत पत्ता लाग्यो । किनकि कालोको खोजीमा आफै निस्कन परेपछि मान्छेको उमेर घट्ने गरेको रहस्योद्घाटन भयो । नत्र त आमाछोरी वा बाबुछोराको उचाइ बराबर, गोलाइ बराबर, लवाइ, खुवाइ, हँसाइ उस्तै, बोलाइ दुरुस्तै भएपछि अनुहारले त धोका दिने नै भयो । गाडीको पो चलेको किलोमिटर वा नम्बरबाट फरक छुट्याउन सकिन्छ । मान्छेको कसरी छुट्याउने ? त्यसमाथि हिजोआजका हाइब्रिड सन्तान, त्यसमा पनि उमेरै नपुगी कपाल कपासजस्तो बनाउने युवाका अगाडि त बाउआमा झन् कम उमेरका देखिने हुँदा बेलाबेलामा झुक्किनु स्वाभाविक हुने नै भयो । कुनै हप्ता कालो लगाउन छुटाएको स्थितिमा भने टाउका कुनाकानीतिर छ्वास्स ढुसी परेको देखिने कारणले नियालेर हेर्नेले भने पुरानो र नयाँ पुस्ता छुट्याउन सक्ने भो, नत्र गाह्रै पर्ने ।
हुन त यो कालो भन्ने चीज नै अलि धोका दिन सक्ने प्रकृतिको हुने रहेछ । कालो रङ मात्र होइन, मन पनि कालो हुँदो रै’छ, धन पनि कालो हुँदो रै’छ । तर, कालो सबै कुरा नराम्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन । ‘कालो भनी नगर हेला’ भन्ने गीतजस्तै ‘काले’ कृष्ण त हिन्दूहरूले असाध्यै माया गर्नेमध्येमा पर्छन् । त्यसैले बाहिर कालो भए पनि भित्र सेतो भए हुने रहेछ । त्यसमा पनि कालो तिल, कालो कराईमा जिम्मु झानेको कालै दाल कति मीठो हुन्छ । अरूको कालो नजरबाट बचाउन कालो सुर्मा वा गाजल लगाउँदा मान्छे कति राम्रा देखिन्छन् । त्यसैले कालो चीज सबै नराम्रो हुन्छ भन्ने छैन ।
तर, मन कालो भएपछि भने काममा पनि कालोपन आउने रहेछ । मन कालो भएकाहरूले धन पनि कालो कमाउने रहेछन् । काम पनि कालै गर्ने रहेछन् ।
कालो भन्नेबित्तिकै हाम्रा सडकहरूको चित्र मनमा आइहाल्छ । भित्र जसरी पिच गरेको भए पनि माथिमाथि कालोपत्र गरिएको छ भने बिल सोझै पास । किनकि कालो मन हुनेहरूलाई छिट्टै कालो धन जम्मा जो गर्नु छ । नेपालमा हुने काला कामहरूको विषयमा त यहाँ फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर साध्यै छैन । थाहा पाइहाल्नु भो, रानीपोखरीमा मात्रै गत २ वर्षमा रू. ५ करोड स्वाहा भएछ । काम कति भयो, जग जाहेर नै छ । बेलाबेलामा कालो कामको विषयमा ‘घिउ बेच्ने र तरबार बेच्ने’बीचको कथा पत्रपत्रिकामा आई नै रहन्छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने काला काम, निजीक्षेत्रले गर्ने काला, खैरा, सेता तामझाम पनि बाहिर आई नै रहेकै विषयहरू हुन् । समाचारमा नआएका त कति होलान् कति ।
कालो अन्धकार हो । भन्न त शेक्सपियरले अज्ञानलाई अन्धकार भनेका थिए । तर यहाँ त ठूला, विद्वान् र ज्ञानी मानिएकाहरूले नै दिउँसै मानिसका जीवनमा अन्धकार वा कालो छर्ने काम गरिरहेका छन् । पञ्चायतको रजाइँदेखि लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्रको भजाइ हुँदासम्म हामीले अँध्यारो नै भोगिरहेका छौं । न कुनै रुखले छहारी दियो, न कुनै हँसिया हथौडाले काम दियो, न कुनै घामले माम दियो । दियो त केवल विदेशको लाम र खाडीको चर्को घाम दियो । मुम्बईका बाईहरूसँग लगेर थुप्रै नेपाली चेलीलाई बद्नाम मात्र होइन, गुमनाम गरायो । किनकि कालो मन भएकाहरूले जनतालाई चामल भनेर कुहिएको ढुटो दिए । श्रीखण्ड भनेर सिमलको ठुटो दिए । सिद्धान्त र वाद पिलाए । अन्त्यमा आप्mनै लागि नयाँ कालो कोट सिलाए । तर, द्वन्द्वका नाममा पीडारूपी पाप्रा र भूकम्प र बाढीपीडितका छाप्राभित्र कालो अँधेरोबाहेक केही दिएनन् ।
यहाँ प्रत्येक पल सीमा मिचिन्छ, तर विरोधमा बोल्नेको घाँटी थिचिन्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासम्म त ल ठीकै थियो, दिनदहाडै इमान र जवान अनि जवानी बेचिन्छ ।
धन नभएर देश गरीब भएको होइन रहेछ । किनकि हरेक वर्ष बजेट ‘फ्रिज’ भइरहेछ । विकाससँगै भावी पुस्ताका सुन्दर भविष्य ‘सिज’ भइरहेको छ । त्यसैले त जताततै अन्धकारको राज्यसत्ता चलिरहेको छ । किनकि अन्धकार कालो छ ।
शायद कालोको यही रहस्य थाहा पाएर नै कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले उहिल्यै लेख्नुभएको थियो, ‘यो सारा सृष्टि कालो मनबीच छ भने दम्भ दुर्भाव कालो ।’
के अब आउने नयाँ सङ्घीय बिहानीले यो कालो अन्धकारबाट मुक्ति दिन सक्ला त ?
यम प्रसाद तीमल्सीना
धेरै राम्रो कला को प्रस्तुती
धेरै नै राम्रो लग्यो !!! मदन सर को लेख !!!
LeaveaReply to यम प्रसाद तीमल्सीना Cancel Reply
त्रिशूली थ्री बी सवस्टशेनको शिलान्याश, लागत ६५.२५ मिलियन युरोे
राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड माग्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय
११ हजार घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका सहायक हवल्दार चन्देश्वरविरुद्ध मुद्दा दायर
स्थानीयले मागे वडाध्यक्षको निलम्बन
पशुपतिनगर नाकाबाट नेपाली तरकारी निर्यात हुन थाले
मन्त्री र सचिवका काममाथि प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टी : ‘यो पाराले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ?’
सल्यानको कुपिण्डे तालमा डुङ्गामा शयर गर्दै पर्यटक
इलामको माई नगरपालिका–३ स्थित मुसेटार फाँटमा धान काट्दै दुई वृद्ध महिला